Nhasi chimwe chinhu chikara chakaitika kwandiri naDaniel Estorach Martín | Zvazvino Zvinyorwa
'Nhasi chimwe chinhu chikara chaitika kwandiri' naDaniel Estorach Martín
Dani Lanza | | Updated on 15/12/2012 13:55 | Novela, dzakawanda
Ndichangobva kuverenga Nhasi chimwe chinhu chikara chakaitika kwandiri, ivo Daniel Estorach, munyori anovimbisa uyo akaunza basa rake kune nyika yekunyora kuburikidza naNorma. Iri ndiro bhuku rekutanga mune ramangwana saga nezve magamba.
Daniel, munhuwo zvake mukomana, ane chimwe chinhu chekukuudza, chimwe chinhu chinoshamisa: mushure memwedzi yekusagadzikana, hellish migraines uye inotyisa mhino dzemhuno, iye chaiye wega anoerekana aonekwa nenzira ine hutsinye uye isingatarisirwi, achichinja hupenyu hwake nehupenyu hwake. shamwari, vavakidzani uye vaunoziva. Mushure memazuva mashoma ekutanga azere nekusahadzika, ave gamba: murume akavharika anofamba mumigwagwa achiedza kurwisa kusaruramisira uye kubatsira avo vanonyanya kudiwa, muBarcelona uko utsotsi, kushungurudzwa nekushungurudzwa zvakazara pamberi pekusakendenga yezviremera uye vagari pachavo. Gamba rakasurukirwa iro, zvishoma nezvishoma, richaona kuti harisi roga muhondo iyi uye kuti havazi vese vanogovana nzira yavo yekuita zvinhu.
Tsvaga iyo nyaya yegamba chairo rinozoita mutsauko, kana kufa kuyedza ... Nekuti mumwe munhu anofanirwa.
Ini ndinofunga iyo yekutanga poindi yekufunga nezve iro basa Nhasi chimwe chinhu chikara chakaitika kwandiri zvinovakirwa pairi kuve imwe nyaya. Pamusoro pezvo, kunyangwe bhuku iri rakanyorwa panguva yakadzikama kupfuura izvozvi padanho rezvematongerwo enyika neremagariro, rinobatana chaizvo neicho chokwadi chakatikomberedza, pamwe nekudikanwa kwevanhu mumugwagwa kurwira nyika yakanaka kwazvo. uori. Zvichida izvo zvave kuita kuti zvive nyore kuti munyori apinde mupfungwa dzevaverengi, vagari vakashatirwa nemamiriro ezvinhu ari kuratidza nguva yedu.
Zvinotendwa kuti munyori anotipa kuverenga kuri nyore uye kunonakidza. Ini pachangu, ndine yakakosha kufanoronga mablog uye chokwadi chekuti bhuku iri rakavakirwa pablog raita kuti zvive nyore kwandiri kuti ndipinde munharo.
Iri bhuku riri nyore kuverenga, asi mune dzimwe nguva rakadzama, nekuda kwekumwe kuratidzwa kunoitwa ne protagonist. Iwe uzere nemifungo nezve zviri kuitika kwauri panguva ino, shanduko yakadzama iyo yakaoma kugamuchira, uye zvakanyanya kukosha, inonetsa kuisa muhupenyu hwako hwezuva nezuva. Inoongororawo nyaya senge rudo kana hushamwari.
Ini ndinofunga kuti chikamu umo hunhu hunofanira kusanganisa basa rake segamba nehupenyu hwake hwebasa chakagadziriswawo zvakanaka, chimwe chinhu chisingawanzo kubatwa nacho munyaya dzezvikuru. Danieri, protagonist ane masimba, anofanirwa kudya senge munhuwo zvake.
Vamwe vakasara vanoshanduka zvakanaka mubhuku rese. Uye nekuda kwesumo ino yakanaka iyo munyori anotipa nesaga iyo ichave nemazita matatu, mumwe anoda kuona kuti inotevera nyaya ichave yakaita sei.
Muchidimbu, inokurumidza uye iri nyore kuverenga bhuku, pamwe nekuvaraidza. Nyaya yakasiyana uye yazvino.
Daniel Estorach Martin Akazvarwa muBarcelona pazuva rekutanga ra1975 uye akapedza hudiki hwake uye kuyaruka muVilassar de Mar, guta rakanyarara pamhenderekedzo yeMediterranean. Pamakore makumi maviri nematatu akazozvimiririra uye akararama kwenguva refu muguta guru reBarcelona, ​​kwaakanakidzwa nekudzidza nezve hupenyu hweguta guru.
Parizvino anogara nemukadzi wake, mwanasikana uye katsi mbiri muVilassar de Mar, uye anoita raramo mumunda wekutaurirana uye semugadziri wemifananidzo uye illustrator.
Kubata kwake kukuru ndekwe uye kwagara kuri kutaura nyaya uye, pakupedzisira, akafunga kuyedza mhanza yake ne trilogy Makoronike egamba remuguta izvo zvatinopa pano, umo ave achishanda kwemakore matatu.
Uye zvakare, mukufanana nekunyorwa kwevhoriyamu 2 ne3 yenyaya dzino, anonyora imwe online online inonzi Aeternites, uye ndiye General Coordinator weiyo Literature 2.0 chirongwa Magamba Nguva, chirongwa chakazvarwa nechinangwa chekuwedzera zvakasikwa zvakaberekerwa mu Nhasi chimwe chinhu chikara chakaitika kwandiri.
Mamwe ruzivo- Blog Nhasi chimwe chinhu chikara chakaitika kwandiri
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » marudzi » Novela » 'Nhasi chimwe chinhu chikara chaitika kwandiri' naDaniel Estorach Martín
Noriega Varela biography
Nhoroondo yaBuero Vallejo